Idiots Band မှာဖြစ်နေတဲ့ ပြဿနာတွေကြောင့်ရေမွန့် ရဲ့ အမေ ခင်မြတ်မွန်နဲ့ ညီမဖြစ်သူ လပြည့်ကဗျာတို့ကို တောင်းဆိုလိုက်တဲ့ အောင်လ…. – Cele Oscar
March 14, 2022 By L YC Celebrity
ပရိသတျကွီးရေ Facebook Twitter ရမှေနျနဲ့ SIR အဖှဲ့ဆိုပွီး သီခငျြးတှေ အတူတူဆိုခဲ့ကွတဲ့ အဆိုတျောအောငျလဟာ ရမှေနျရဲ့လုပျဖျောကိုငျဖကျ အဆိုတျောတဈယောကျဖွဈသလို ရမှေနျ နဲ့ ညီအဈကိုတှေ လို ခငျမငျရငျးနှီး ခဲ့ ကွတဲ့ သူငယျခငျြး တဈယောကျလညျးဖွဈပါတယျ။ ဒီကနမှေ့ာတော့ အောငျလက ရမှေနျတို့ Idiots Band အကွောငျး ကောငျးကောငျး သိတာမို့ လကျရှိ Idiots Band မှာဖွဈနတေဲ့ ပွဿနာတှကွေောငျ့ စိတျပူနရေပွီး ရမှေနျ့ ရဲ့ အမေ ခငျမွတျမှနျနဲ့ ညီမဖွဈသူ လပွညျ့ကဗြာတို့ကိုလညျး ရမှေနျ နဲ့ ပတျသကျပွီး လုပျစားတာတှရေပျပါတော့လို့ တောငျးဆိုခဲ့ပါတယျ။
အောငျလက “Tut p ကို လုပျစား(အသံ file လေးတှရှေိတယျ) Tut p ကို ဘယျသူသတျခဲ့လဲဆိုတာ… သူခဈြတဲ့ ကနျြခဲ့တဲ့band ကို ခြောကျခြ ခငျမြားတို့ မလှနျဘူးလား..” “တျောပွီလဗြော…. အနျတီနဲ့ညီမလေး လုပျစားတာ…သှားပါ စဗြော ပိုကောငျးတဲ့ ဘဝကို… ခဈြတယျဆို… သူ့အိမျမှာ သူနခေဲ့တာ….အတူတူ မနခေဲ့ပါဘူး သိခငျြးရေးရငျ ရေးပေးလို့ ရပါတယျ……Tut p ခဈြခဲ့တဲ့ band အတှကျ ဘာမှ မလုပျပေးခဲ့ရငျတောငျ သူ့ယုံကွညျခကျြကို မဖကျြ ပါစနေဲ့လို့ ဆုတောငျးတယျ ….ညီမလေးနဲ့ အနျတီရေ”၊ “သိနျး ၁ ထောငျက မလုံလောကျသေးဘူးလား။ ကြှနျတျောတို့ အတှကျ ၊သူငယျခငျြးတှေ အတှကျတော့ မလုံလောကျဘူး….. လောကမှာ စောကျဆံ က အရေးမကွီးဘူး။ အဲ့ဒါ ဘိုစော ကိုယျတိုငျပွောခဲ့တာ￼” ဆိုပွီး သူ့ရဲ့ဖစျေ့ဘုတျစာမကျြနှာကနတေဆငျ့ ပွောလာပါတယျ။
လကျရှိမှာတော့ ရမှေနျရဲ့မိခငျဒျေါခငျမွတျမှနျ၊ ညီမဖွဈသူ လပွညျ့ကဗြာ နဲ့ ရမှေနျ့ရဲ့ ဒုတိယမိသားစုလို့ဆိုနိုငျတဲ့ Idiots Band ကွားမှာ နားလညျမှုလှဲတဲ့ပွဿနာအခြို့ဖွဈပျေါနတောဖွဈပွီး အောငျလကလညျး ရမှေနျ ခဈြတဲ့ Idiots Band နဲ့ ရပျတညျပွီး အမှနျတရားဆိုတဲ့ စကားအခြို့ကို ရငျဖှငျ့လာခဲ့တာပဲဖွဈပါတယျ။
ပရိသတ်ကြီးရေ Facebook Twitter ရေမွန်နဲ့ SIR အဖွဲ့ဆိုပြီး သီချင်းတွေ အတူတူဆိုခဲ့ကြတဲ့ အဆိုတော်အောင်လဟာ ရေမွန်ရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် အဆိုတော်တစ်ယောက်ဖြစ်သလို ရေမွန် နဲ့ ညီအစ်ကိုတွေ လို ခင်မင်ရင်းနှီး ခဲ့ ကြတဲ့ သူငယ်ချင်း တစ်ယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကနေ့မှာတော့ အောင်လက ရေမွန်တို့ Idiots Band အကြောင်း ကောင်းကောင်း သိတာမို့ လက်ရှိ Idiots Band မှာဖြစ်နေတဲ့ ပြဿနာတွေကြောင့် စိတ်ပူနေရပြီး ရေမွန့် ရဲ့ အမေ ခင်မြတ်မွန်နဲ့ ညီမဖြစ်သူ လပြည့်ကဗျာတို့ကိုလည်း ရေမွန် နဲ့ ပတ်သက်ပြီး လုပ်စားတာတွေရပ်ပါတော့လို့ တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။
အောင်လက “Tut p ကို လုပ်စား(အသံ file လေးတွေရှိတယ်) Tut p ကို ဘယ်သူသတ်ခဲ့လဲဆိုတာ… သူချစ်တဲ့ ကျန်ခဲ့တဲ့band ကို ချောက်ချ ခင်များတို့ မလွန်ဘူးလား..” “တော်ပြီလေဗျာ…. အန်တီနဲ့ညီမလေး လုပ်စားတာ…သွားပါ စေဗျာ ပိုကောင်းတဲ့ ဘဝကို… ချစ်တယ်ဆို… သူ့အိမ်မှာ သူနေခဲ့တာ….အတူတူ မနေခဲ့ပါဘူး သိချင်းရေးရင် ရေးပေးလို့ ရပါတယ်……Tut p ချစ်ခဲ့တဲ့ band အတွက် ဘာမှ မလုပ်ပေးခဲ့ရင်တောင် သူ့ယုံကြည်ချက်ကို မဖျက် ပါစေနဲ့လို့ ဆုတောင်းတယ် ….ညီမလေးနဲ့ အန်တီရေ”၊ “သိန်း ၁ ထောင်က မလုံလောက်သေးဘူးလား။ ကျွန်တော်တို့ အတွက် ၊သူငယ်ချင်းတွေ အတွက်တော့ မလုံလောက်ဘူး….. လောကမှာ စောက်ဆံ က အရေးမကြီးဘူး။ အဲ့ဒါ ဘိုစော ကိုယ်တိုင်ပြောခဲ့တာ￼” ဆိုပြီး သူ့ရဲ့ဖေ့စ်ဘုတ်စာမျက်နှာကနေတဆင့် ပြောလာပါတယ်။
လက်ရှိမှာတော့ ရေမွန်ရဲ့မိခင်ဒေါ်ခင်မြတ်မွန်၊ ညီမဖြစ်သူ လပြည့်ကဗျာ နဲ့ ရေမွန့်ရဲ့ ဒုတိယမိသားစုလို့ဆိုနိုင်တဲ့ Idiots Band ကြားမှာ နားလည်မှုလွဲတဲ့ပြဿနာအချို့ဖြစ်ပေါ်နေတာဖြစ်ပြီး အောင်လကလည်း ရေမွန် ချစ်တဲ့ Idiots Band နဲ့ ရပ်တည်ပြီး အမှန်တရားဆိုတဲ့ စကားအချို့ကို ရင်ဖွင့်လာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။